Hetsiky ny “ZRPS ALPHA” tany Ihorombe Omby 75 sy basy iray no tratra
Kavin’omby miisa 135 no tratra tao an-tranon’ny raim-pianakaviana lehiben’ny dahalo ambony latabatra iray, ny talata 28 mey teo.
Araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena, nandritra ny firotsahana an-tsehatra tamin’ny fanatanterahana ny fampandriantany notanterahin’ny miaramilan’ny “Zone rurale prioritaire de sécurité”na “ZRPS Alpha” no nahatrarana ireo mari-pamantarana eo amin’ny sofin’omby izay tsy ara-dalàna ireo. Tra-tehaka koa tao Amboankify, Ambalamidera, Vohitrarivo, ao amin’ny faritra Ihorombe ny basimborona iray sy ny omby 75 izay efa tafaverina tamin’ny tompony. Ankoatra ireo, moara iray fitondran’ireo malaso miaraka amin’ny ody mahery koa no saron’ny “ZRPS ALPHA”. Tsiahivina fa ny manampahefana ara-panjakana ihany no afaka mitahiry sy mametraka ny kavin’omby toy izao, tahaka ny dokotera mpitsabo biby. Mifanandrify amin’ny omby teraka ny fametrahana ireny kavina ireny izay iantsorohan’ny sefo fokontany sy ny tompon’omby ny ho fanoratana azy ao anatin’ny bokin’omby. Tsy afa-misaraka amin’ny FIB na ny kara-panondron’omby anefa izany izay iantsorohan’ny tompon’andraikitry ny lehiben’ny faritra, ny distrika sy ny veterinera, indrindra ny delegem-panjakana. Midika izany fa efa misy bokin’omby sy Fiche individuelle des bovidées miiisa 135 any ho any hanadiovana ireo omby halatra ka ao anatiny ireto 75 izay tra-tehaka ireto.